July Dream: Some speech of Bogyoke
Posted by JulyDream at 10:02 AM
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းကို လေးလေးနက်နက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ် ညီလေးရေ..
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စကားတွေကို မှတ်မှတ်သားသား ရှိစေခဲ့ပါတယ်။
တကူးတက ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဒီမိန့်ခွန်း ကျွန်တော်မဖတ်ဖူးသေးဘူး. တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်.
Thanks, Nyilay, it is good for us to read suchakind of inspiration speech. Please post more.
ရာဇ၀င်ထဲ အရေးခံမယ့် လူလား
ရာဇ၀င်မှာ အဆဲခံရမယ့် လူလား..
ဟိုငတိတို့အဖွဲ့ စဉ်းစားဖို့ ဥာဏ်မှီပါ့မလားးးးး
သူ့ဘာသာသူ ကံကောင်းပြီး စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်သလို လူထုခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တချို့သောသူများကို သိစေချင်တဲ့ သဘောတွေကို အခြေခံပြီး ပြန်လည် ဝေမျှ တင်ပြလိုက်တာပါ ခင်ဗျာ။